トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ USC card olujikelezayo ngetyala | ezifana inzala yikomishoni ukubala, iinkcukacha inkonzo
inkalo engundoqo credit olujikelezayo kwekhadi UC kukuba ikhona inkonzo ebizwa ngokuba "ribonucleic kamva". Kule nkonzo, kwanokuba komnikazi ngokukhetha i "esisixa" yaye "izavenge" ngexesha lokuthengwa kweempahla kunye neenkonzo, unako ukutshintsha kwi credit olujikelezayo kamva xa kuyimfuneko. Ngaphezu koko, kusenokwenzeka ukuba lula ukutshintsha i Internet okanye ifowuni, inkqubo edinayo ingafuneki.
Kwakhona, ukuba ibhaliswe kwangaphambili, yonke intlawulo yenziwe kwingxowa-credit olujikelezayo "Declaration ribonucleic" nayo yenye yeenkonzo. Ngokusebenzisa le nkonzo, ninokukuphepha njani ukuba ukhankanye "kwi credit olujikelezayo" ngexesha ngalinye yokuthenga. Noko ke, naxa waxelelwa ukuba "xa intlawulo esisixa-mali" ngexesha intlawulo kwi phezu-the-counter, enyanisweni, kuba loo nto ayise olujikelezayo ngetyala, makhe sinikele ingqalelo kuloo ngongoma.
Ukongeza, ikhadi UC kwaye kukho ikhadi "olujikelezayo ngetyala kuphela", eli khadi unako ukufumana inkonzo efanayo njenge "Declaration ribonucleic".
kwi olujikelezayo isicwangciso intlawulo yetyala
UC ikhadi le khosi standard nekhondo ixesha elide, ukusuka ngeentlobo ezimbini "ikhondo standard nekhondo ixesha elide", ungakhetha isicwangciso intlawulo. Ukuba imali iyafumaneka kwi usuku olusikelwe ezi incinane kune okanye ilingana 100,000 yen, kwimigangatho kwikhosi 5,000 yen ngenyanga nganye, ngexesha ixesha elide 3,000 yen ngenyanga nganye iya kuhlawulwa.
Ukongezelela, ngokusebenzisa imali eseleyo kwi usuku olusikelwe ezi, imali lokuhlawula ikhosi nganye eyahlukileyo. Ngoko ke, hayi kuphela isicwangciso lokuhlawula wanyula ngexesha isicelo, kubalulekile ukuba bokusetyenziswa ngexesha uyazibona njalo eseleyo ekhoyo enyangeni.
Isixa intlawulo yemali, kuba ikwaquka imirhumo kwakunye inqununu, kuya kuba yimfuneko ukuba ngokwahlukileyo ikhomishini.
shopping olujikelezayo iimali credit lwekhadi UC olujikelezayo ngetyala umyinge wenzala ikhomishini kunye nendlela ubalo
UC ikhadi le "izinga enkulu zonyaka ka-15. 0 ekhulwini ". Oku kuya kuba amanani avareji njengoko izinga ngetyala esijikelezayo yonyaka.
umzekelo, ukuthenga iimveliso 10,000 yen ngetyala esijikelezayo ka-UC khadi, intlawulo mali iyonke ityala ndokuhlawula emva kwenyanga kuya kuba "10,000 yen × 1.25% (1 umdla rate) = 10,125 yen '. Ngamanye amazwi, ungabona ukuba ukuza busemngciphekweni ngumrhumo ngomyinge wenzala we yen 125. Kuba mali esiyintlawulo ngenyanga imali akuxhomekekanga abazinikele inqununu bonke, ngexesha lokusetyenziswa Masibhale ngokuqinileyo ukuqinisekisa imeko yenyanga intlawulo.
reference | ubalo ndlela olujikelezayo ngetyala, kwi ziko lewebhu Ukulinganisa
UC card, usebenzisa i "ezivenkileni Ukulinganisa intlawulo ribonucleic", unako lula ukubala iintlawulo izinga lenzala. Ukuba ufuna ukwenza isicwangciso intlawulo ngakumbi ngqo, ungafuna Ukulinganisa enjalo uzame ukusebenzisa ngenkuthalo.